Disney Infinity ho an'ny Apple TV dia miaraka amin'ny SteelSeries Nimbus | Vaovao IPhone
Navoaka omaly i Walt Disney Disney Infinity 3.0 ho an'ny Apple TV taranaka fahefatra fa ity "boaty lalao" ity dia tsy tonga irery. Izy io dia miaraka amin'ny mpandrindra SteelSeries Nimbus, mpanara-maso izay notsapainay tamin'ny Actualidad iPhone ary afaka manome toky anao izahay fa, raha tsy ny tsara indrindra, dia iray amin'ireo fanaraha-maso MFi tsara indrindra hita eny an-tsena izy amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga raha ny Nimbus dia vidin'ny € 59,95 ao amin'ny Apple Store.
Ny kinova Disney Infinity 3.0 ho an'ny Apple TV 4 dia miaraka amin'ny tarehimarika mahazatra ary omena vidiny ao amin'ny US Apple Store de 99,95 $. Amin'izany vidiny izany ianao dia hividy ny tarehimarika, ny SteelSeries Nimbus ary ny lalao, izay ho an'ny console dia $ 65. Raha manampy ny vidin'ny lalao amin'ny an'ny mpanara-maso ($ 50) isika dia mahazo valiny $ 115, ka ho an'ny $ 15 dia kely ny mpankafy afaka mandray isa ihany koa.
Nilaza i Disney fa ny Infinity 3.0 ho an'ny Apple TV dia manome azy ireo fotoana hahatratrarana gamer izay tsy manana console tena lafo. Ny lalao malaza hafa koa dia natao ho an'ny Apple TV, ao anatin'izany ny kinova farany an'ny Skylanders y Guitar Hero, ka nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny tsena izay manana ho avy mampanantena ihany koa i Disney
Rehefa nampiditra ny Apple TV an'ny Apple fahefatra tamin'ny volana septambra dia tsy niresaka momba ny mpanara-maso MFi, na tsy dia niresaka firy izy. Tamin'ny fampisehoana nataon'izy ireo dia naleon'izy ireo nasehonay anay ny mety ho Siri Remote, ny mpanara-maso ofisialy izay hampiasaina hilalao lalao sasany toa ny an'ny Wii. Azo takarina ihany koa, satria ao amin'ny iOS dia efa misy lalao manohana ny fifehezana ary efa nieritreritra izahay fa afaka mampiasa azy ireo amin'ny Apple TV ihany koa. Fa ny marina dia ny mpanara-maso no ho ampahany lehibe amin'ny lalao tvOS. Nilalao lalao tamin'ny iPad nandritra ny andro vitsivitsy niaraka tamin'ny Nimbus aho ary resy lahatra aho fa ny konsol nentin-drazana dia mila mamerina mamorona tena na manjavona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Disney Infinity 3.0 ho an'ny Apple TV dia tonga miaraka amin'ny baikon'ny SteelSeries Nimbus
Alex (Toretto) (@ toretto85bcn) dia hoy izy:
mifanaraka tanteraka amin'i Pablo, ny consoles mahazatra dia tsy maintsy mamerina ny tenany na hanjavona ... Microsoft noho izany antony izany dia nametraka ny Windows 10 tao amin'ny XBOX 3 (Iray) hahatonga azy io ho "Smart" ankoatry ny lalao mahery ... Ary izany olana izany no Hitako ny PlayStation sy Nintendo… Izaho manokana dia nanana console marobe, na portable na desktop, na ny farany azoko dia ny PS4 ary namidiko izany satria efa nandoa ny zavatra rehetra tamin'ny karatra tokana niaraka tamin'ny consoles Smart (Apple TV, aho. iPhone, iPad, iPod ...) satria fitaovana marobe, finday sy birao, lalao maimaim-poana na karama nefa mora kokoa, emulator console Retro, azo lalaovina amin'ny mpanara-maso mahazatra na mpibaiko karazana wii toy ny consoles mahazatra, afaka lalaovina an-tserasera ary raha mijirika hananana lalao karama maimaim-poana ianao dia tsy mandrara anao, Game Center no namanao, zava-bita, naoty, sns, sns ... Izany dia nanampy tao anatin'ny ekolojia iray feno Apps. Izay efa nolazaina hoe Hello Smart Consoles, veloma ny konsoly nentin-drazana ...
Valiny tamin'i Alex (Toretto) (@ toretto85bcn)
Ny iPad Pro ... fitaovana sarotra amboarina